Iyo Shanduko yeMalogo | Martech Zone
Iyo Shanduko yeLogos
Svondo, Kubvumbi 21, 2013 Svondo, Kubvumbi 21, 2013 Douglas Karr
The folks at Iyo Logo Kambani kumbira Chinongedzo chinofanira kunge Chisingagumi? Kwete.Logos haisi yemufananidzo usingakanganwike kana kutaridzika kwechiratidzo chavanomiririra, ivo zvakare vanoenderana zvakanyanya nesvikiro ravanoonekwa uye nehunyanzvi hwekuzviona. Chiratidzo chemotokari chiri kudhindwa, pawebhu, uye pamota… saka ndizvo inofanira kugadzirwa kune vese vanomiririra mhando uye vanoonekwa nenzira inoenderana pane ese masvikiro… uye grill yemota yako.
Makore apfuura, logo dhizaini yaisanganisira kuti logo yacho yaizotaridzika sei mutema nemuchena kana pamuchina wefax… aya haasi masvikiro atiri kunetseka nawo mazuva ano. Logo zvitaera wakura nekufamba kwenguva futi, uye zvingave zvakakosha kuti urambe uchitaridzika kunge nyowani nyowani. Mune ramangwana, ndine chivimbo chekuti matatu mativi, akaturikidzana, kana marogo ekufamba anozove akakurisa sezvo zvishandiso zvedu zvichitsigira. Iko kune tani ye logo zviwanikwa kunze uko kuti uzive nemarogo ari kufambira mberi.
Isu tangobva kuvandudza logo yedu ku DK New Media, kubva:
Iyo vhezheni yaive mubatanidzwa weiyo D uye K mune chifananidzo icho chaifanirwa kunge chiri kuratidza ziso rinotarisa kune ramangwana. Hapana munhu akawana izvo, zvakadaro, uye majee emapapiro eBatman akatevera. Dhizaini yedu yemifananidzo, Nathan, akatora uye akagadzira logo inomiririra isu zvakanaka. Isu tinotora dzakasiyana, tsika nzira dzekutyaira mhedzisiro yevatengi vedu kumusoro. Chiratidzo chitsva:
Heano dzimwe shanduko dzemarogo akakurumbira kubva ku Iyo Logo Kambani:
Tags: logo yeapurobmw logokanoni logoibm logokodak logologoMercedes logomercedes-benz logoMicrosoft logoMicrosoft windows logopepsi logoshell logovolkswagen logovw logowindows logoxerox logo
Yako Yemagariro Midhiya Dambudziko Mhinduro Kuri Kukuvadza Basa Rako
Apr 22, 2013 pa 10: 09 AM
Ndinoda mapapiro eBatman! Asi ini ndinoda Star Wars X-Wing Fighters futi. Iko kushamwaridzana kwakadaro chinhu chisina kunaka here? Pamwe, pamwe kwete. Ini ndinofunga gradients inogona kuwedzera hupfumi kune logo, asi yako nyowani INOZVIMIRA pane gradient yekutaurirana chimiro. Izvo zvinokupinza mudambudziko nemadiki mashoma, uye kana / kana iwe uchida nhema uye chena vhezheni.
Uye apo ini ndichibvumirana nemweya wechinyorwa ichi maererano nekushanduka kwechiratidzo che brand, ndinofunga zvinosekesa iwe kusanganisira Pepsi. Vamwe vanogona kupokana kuti shanduko yechiratidzo ichocho yakurudzirwa nekutya - kubata kwehupenyu. Ini ndinofunga chokwadi chekuti ivo vakachinja kazhinji kazhinji emanzwiro ekusagadzikana uye kusahadzika kwekusahadzika. Ipo mukwikwidzi wavo wekutanga Coca-Cola akazendamira pazita rake kuburikidza nemazera. Chinja kune yepamoyo brand rave risinganzwisisike, uye pop tsika yakazvitora sechidimbu cheAmericana.
Pfungwa yangu ndeyekuti, nepo logo isingafanire kunge isina nguva, iwe unofanirwa kushandira imwe iri. Unogona kugara uchichinjisa mameseji akaikomberedza, asi vanhu vanonyaradzwa uye vanovimba nemhando dzinovimba, uye vanoseka izvo zvisiri. Unorwisa sei mutengi kutsoropodza? Iva wechokwadi.
Apr 23, 2013 pa 4: 57 AM
Iwo maYMCA logo haasi ekushanduka - kunyangwe ivo vangangoida. Iwo anongova marogo emaYMCA akasiyana kana zvivakwa uye kusvika pandinogona kutaura kuti ese achiri kushandiswa.